समानुभुती – एक विवेकशील मन्त्र | Mahesh Pathak
अरुको दु:ख वा भावनालाई अनुभव गर्नु तथा बुझ्नुलाई नै समानुभुती भनिन्छ। यसलाई अङ्ग्रेजीमा empathy भनिन्छ। समानुभुतीमा २ कुराहरु जोडिएका हुन्छन्: पहिलो समानुभुती राख्ने व्यक्तीले अरुले जस्तो महशुस गर्दै छ, त्यस्तो महशुस गर्दछ, र दोस्रो उसले अर्कोको के-कस्तो महशुस गर्दैछ भनेर बुझ्दछ।
अरुको दु:ख-कष्ट वा भावनालाई त्यस व्यक्तीको परिस्थिति अनुरुप बुझ्ने क्षमता नै समानुभुती हो।
समानुभुती र सहानुभूति उस्तै उस्तै हुन् त?
समानुभुती र सहानुभूति फरक फरक कुरा हुन्। सहानुभूतिको अर्थ हुन्छ अरुको दु:ख-कष्टलाई देखेर जागेको दया वा करुणाको भावना। सहानुभूति राख्ने मान्छेले अर्कोको भावना वा परिस्थिति गहिराईबाट बुझेको हुँदैन। र आत्मसम्मानको साथ जिउने मान्छेलाई अरुको सहानुभूति मन पनि पर्दैन। तर, समानुभुती राख्ने व्यक्ती भने सबैलाई प्रिय हुन्छ।
यसरी, समानुभुती सहानुभूति भन्दा धेरै उच्च भावना हो।
समानुभुती किन जरुरी छ?
मानिस एक सामाजिक प्राणी भएकोले समाजमा बस्दछ। समाज अन्तर-व्यक्ती संबन्धको आधारमा नै रहेको हुन्छ। एक अर्काको आवश्यकताको परिपुर्ति गर्दै बाँच्नुमा नै सामाजिक जीव हुनुको सार्थकता हुन्छ। हामीले एक-अर्काको आवश्यकतालाई बुझ्नको लागी एक-अर्काको परिस्थिती र भावनालाई बुझ्नु जरुरी हुन्छ। अर्थात, समानुभुती राख्न सक्नु जरुरी हुन्छ।
समानुभुती राख्ने क्षमता मान्छेमा मात्र हुन्छ। त्यसैले, यो एक उच्चतम मानवीय गुण तथा क्षमता हो। मानव समाजको निरन्तरता वास्तवमा मान्छेको यही गुणले हर्दा नै संभव भएको हो।
र झै-झगडा, युद्ध आदि मानव समाजमा जे जती समस्या उत्पन्न भएका छन्, त्यसको कारण पनि समानुभुती राख्न नसक्नु नै हो।
जो व्यक्तीमा समानुभुतीको गुण उच्चतम रुपमा विकशित भएको हुन्छ, उसले कसै प्रती वैमनस्यताको भावना राख्दैन। सबै प्रती मित्रवत संबन्ध कायम गर्न सक्छ।
विवेकशील नेपालीले समानुभुतीलाई किन आफ्नो मुल-मन्त्र बनाएको छ?
हरेक विवेकशील नेपालीमा समाधान-केन्द्रित सोच हुनु अनिवार्य छ। र समस्या समाधानको लागि समानुभुती अत्यावश्यक गुण हो।
समानुभुतीले विवेकशील सदस्य/नेतृत्वलाई यी कुराहरुमा सहयोग गर्छ:
जनताको भावना तथा आवश्यकतालाई सहि रुपले बुझेर त्यस अनुरुप कार्य गर्न
प्रतिपक्षको सोच तथा नितिलाई सहि तरिकाले बुझ्न
विवेकशील सदस्यहरु वा/तथा नेतृत्वहरु बिचको अन्तर-व्यक्ती संबन्ध मजबुत राख्न
समानुभुती कसरी जाग्दछ?
समानुभुती तब जाग्दछ, जब हामी अर्को व्यक्तीको परिस्थितिलाई बुझ्न सक्छौं। अर्को व्यक्तीको परिस्थितिलाई बुझ्ने ३ प्रमुख तरिका हुन्छन्:
अर्को व्यक्तीलाई कुनै घटनाको कस्तो प्रभाव परेको होला भन्ने कल्पना गरेर उसको परिस्थितिलाई बुझ्न सकिन्छ। जस्तै, भुकम्प पीडित वा बाढी पीडितलाई सहयोग गर्न जाने धेरै जसो व्यक्तीहरुले यस तरिकाबाट समानुभुती राखेका हुन्छन्। घरबार विहिन हुनुपर्ने, आफन्तजन गुमाउने तथा बिहान बेलुकाको छाक टार्न मुस्किल हुने परिस्थितिको सामना ती प्रकोप पिडितहरुले गर्नु पर्ने कुराको कल्पना गरेर उनिहरु प्रकोप पछी तत्कालै सहयोगको लागी अघि बढ्छन्।
समानुभुती राख्ने अर्को प्रमुख तरिका स्व-कल्पना हो। उक्त परिस्थितिमा यदी आफु भएको भए आफुले कस्तो दु:खको सामना गर्नु पर्थ्यो भन्ने कल्पना गरेर पनि व्यक्तीले अरु प्रती समानुभुती राख्न सक्दछन्। वास्तवमा यो तरिकाबाट समानुभुती राख्ने व्यक्तीहरुमा सहयोग गर्ने तत्परता उच्चतम हुन्छ। यदी कसैले उक्त परिस्थितिको सामना आफ्नो जीवनमा पहिले नै गरिसकेको छ भने त्यस व्यक्तीमा झनै सहजै समानुभुती जाग्दछ।
फ्यान्टसी (fantacy) पनि समानुभुतीको महशुस गर्ने एक तरिका हो। कुनै चलचित्र हेर्दा वा पुस्तक पढ्दा पात्रको परिस्थिति तथा भावनालाई बुझेर जागृत हुने समानुभुती यस प्रकारको समानुभुती भित्र पर्दछ।
समानुभुती एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विवेकशील मन्त्र हो। यदी तपाई साँच्चै विवेकशील नेपाली बन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले आफ्नो व्यक्तिगत जिवनमा यस मन्त्रलाई अवश्य अपनाउनु हुनेछ। र यसबाट प्राप्त हुने लाभ तपाईलाई अवश्य पाउनुहुनेछ।
तलको कमेन्ट बक्स मार्फत यस लेखको बारेमा प्रतिकृया दिन नभुल्नुहोला है!
← के रिचार्ज कार्ड नङले कोर्दा क्यान्सर हुन्छ?	अन्तर-व्यक्ती संबन्ध राम्रो बनाउने विवेकशील मन्त्र – समानुभुती →